Somalia: Al-shabaab Oo Sheegatay Inay Lix Askari Ka Dishay Ciidammada Dawladda - Wargane News
Home Somali News Somalia: Al-shabaab Oo Sheegatay Inay Lix Askari Ka Dishay Ciidammada Dawladda
Xoogag ka tirsan Al-shabaab ayaa subaxnimadii hore ee Shalay weerar ku qaaday saldhig ciidamada dowladda Soomaaliya ku leeyihiin deegaan u dhaw degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe.
Saldhigga ciidamada dowladda ee weerarka lagu qaaday ayaa ku yaalla waddo isku xidha Balcad iyo degmada Afgooye, gaar ahaan deegaanka Basra oo dhinaca Galbeed ka xiga degmada Balcad.
Afhayeen u hadlay Al-shabaab ayaa sheegay in ay weerarkaa ku dileen 6 Askari oo ka tirsanaa ciidamada Milletariga Soomaaliya.
Sidoo kale, waxaa ay Al-shabaab sheegteen in ay la wareegeen Saldhigga, laakiin ma jiraan ilo ka madax-banaan Al-shabaab oo xaqiijinaya shaagashadooda.
Dadka deegaanka weerarka uu ka dhacay waxaa ay Warbaahinta u sheegeen in saldhigga la weeraray ku sugnaayeen ciidamo aan badneyn oo ka tirsan Milletariga Dowladda Soomaaliya, laakiin goob-joogayaashu kama hadal khasaaraha dagaalka ka dhashay.
Weerarada Al-shabaab ay ka geystaan gobollada Shabeellada Dhexe iyo Shabeellaha hoose ee Dalka Soomaaliya ayaa Maalmihii u dambeeyay ahaa kuwo isa soo taraya, iyaga oo weerarada ay qaadaan ku beegsada saldhigyada ciidamada dowladda.